Site, kana kana pasina kubvumirwa webmaster. Kunyangwe kugadzira kunoitwa nemaune, dzimwe nzira dzekuchera web dzinogona kuchengetedza nguva yako yese nesimba. Aya ndiwo maitiro asingakoshi zvikuru asina unhu hwekusava nechokwadi uye kukanganisa.
Google Mapepa inoshandiswa sechinhu chakasimba chekuchera - joyetech bf ss316 replacement coil. Icho chimwe chezvakanakisisa uye chinonyanya kuzivikanwa pakuronga mapurogiramu ewebhu. Inobatsira chete kana zvidimbu zvinoda mapepa chaiwo kana deta kuti ibudiswe kubva ku blog kana kuti site. Iwe unogonawo kushandisa iyi kuti uone kana iwe site yako ichitsva-uchapupu kana kwete.
2. Nzira yekufananidza magwaro:
Ndiyo nzira inoshandiswa nguva dzose inoshandiswa pakugadziriswa neUNIX grep mirayiridzo inoenda nemitauro yakakurumbira yokuronga Python uye Perl.
3. Kugadzira zvinyorwa: nzira yekunyora:
Bhuku rinonyorwa rinoshandiswa nemushandi pachake uye rinotora nguva yakawanda nekuedza. Zvizhinji zvezviitiko izvi zvinodzokorora uye nguva inopedza sezvaunofanirwa kutora kubva kune dzimwe nzvimbo dzewebasa usingabvumi kuti webhuperi vazive nezvemabasa enyu. Rimwe bhidhiyo purogiramu uye vashandisi vanoshandisa bots automiti nekuda kwechinangwa ichi.
4. HTML nzira yekushandisa:
5. DOM Nzira yekugadzirisa:
Document Object Model (inozivikanwawo seDOM) ndiyo maitiro, zvinyorwa, uye chimiro cheji yewebhu. pamwe nemafuta e-XML.Scrapers vakawanda vanoshandisa DOM kune vamwe nekunyatsonzwisisa ruzivo nezvehupenyu uye sarudzo yewebsite.Ungashandisa aya DOM kune vamwe kuti vawane nodhi dzehumwe ruzivo.Kumwewo, unogona kuedza zvishandiso zvakadai seXPath uye mapeji ako aunonyanya kufarira pakarepo.Vokushandura zvizere zvewebhu zvakadai seMozilla uye Chrome zvinogona kuiswa mukutora iyo webhusaiti yose, kana kuti zvishoma zvikamu, kunyange kana zvinyorwa izvi zvichigadzirwa uye zvine simba.
B ig makambani uye mabhizimisi zvikuru vanoshandisa vertical aggregation technique nemasimba makuru emakombiyuta. Inobatsira kutsvaga zvinyorwa zvakajeka uye inoshandisa data pamusoro pemafuta ayo. Zvisikwa uye kutarisa kwebhoti zvakananga zvinoshandiswa uchishandisa nzira iyi, uye hapana kupindira kwevanhu kunodiwa.
XML Path Mutauro (munguva pfupi inonyorwa se XPath) ndiyo mutauro wemubvunzo uchashanda pane zvinyorwa zve XML nenzira iri nani. Sezvo zvinyorwa zve XML zvinosanganisira zvigadziri zvemiti, XPath inogona kubatsira kufamba mhiri kwemiti nekusarudza node dzakabva pamarudzi avo nemiganhu. Iyi nzira inoshandiswawo mukugadzirisa pamwe neDOM parsing uye HTML parsing. Inobatsira kubvisa webhusaiti yose uye kubudisa zvikamu zvaro zvakasiyana zvakadya nzvimbo dzaidiwa.
Kana iwe usingadi chero hupi hwehutano uhwu uye uri kutsvaga chigadzirwa, ungaedza Wget, Curl, Import.io, HTTrack kana Node.js.